Ole Gunnar Solskjær oo la dardaarmay Frank Lampard kaddib markii shaqada laga cayriyay – Gool FM
(Manchester) 26 Jan 2021. Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa rumeysan in tababarihii hore ee Chelsea ee Frank Lampard uu yeelan doono xirfad wanaagsan oo dhanka tababarka ah.
Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa shalay si rasmi ah u shaacisay inay ceyrisay tababaraheedii Frank Lampard kaasoo muddooyinkii u dambeeyay la hadal hayay inay shaqadiisa shaki badan dhex fadhiso, kaddib qaab ciyaareedkii niyadjabka ahaa gaar ahaan kulamada horyaalka.
Tababare Ole Gunnar Solskjær oo ka soo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka habeen dambe ee Sheffield United ayaa wuxuu yiri:
“Waxba igama quseeyaan arrintan si aan uga hadlo in badan, waan ogahay in Frank Lampard uusan doonaynin inaan u muujino naxariis.”
“Waan hubaa inuu kusoo laaban doono xaaladdiisii caadiga ahayd isla markaana uu qaadan doono koorso tababar oo wanaagsan.”
“Chelsea waxaa la soo daristay xaalad xun, waqti aan fogayn ayay ku sugnaayeen hoggaanka horyaalka, mana aysan ku noolaanin waqtiyo xun muddo dheer.”